VideoMakerFx, Easy Animated Video Creation Online Course for Marketers
50% Discount before 05/06/2020
Hi, I’m Ko Andrew. I will be your instructor for this course.
I will teach you how to create promo/advertising videos using VideoMaker Fx Software for Youtube, Facebook Pages and other media platforms from scratch.
Beneficiary Name: Aung Myint Myat
CB : 3571 0830 3925 8578
KBZ: 9993 0713 9002 31601
AYA: 0100 2010 1002 9681
Wave Pay, KBZ Pay: 099 6540 1222
-Digital Marketing ပညာရပ်ကို လေ့လာနေတဲ့သူ (သို့) Digital marketing Indusrty ထဲမှာကျင်လည်နေသူတစ်ယောက်လား၊
-Facebook Page တွေမှာ မိမိကိုယ်ပိုင် business (သို့) အလုပ်တွေလက်ခံပြီး Promotion Video တွေကိုဖန်တီးပြုလုပ်ပေးနေရသူတစ်ယောက်လား၊
-Youtube Channel တွေမှာ ဗီဒီယိုတွေတင်ပြီး promote လုပ်နေတဲ့ Youtuber တစ်ယောက်လား၊
-Animated promotion video လေးတွေကို ဖန်တီးရတာဝါသနာပါသူ၊ နည်းပညာလိုက်စားသူတစ်ယောက်လား။
ဒါဆိုရင်တော့ အခုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့ (အတန်း) က မိတ်ဆွေအတွက်ဘာတွေ အကျိုးအမြတ်ရှိပြီး လက်တွေ့မိမိနှင့် မိမိလုပ်ကိုင်နေတဲ့စီးပွားရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါရစေ။
ယနေ့ခေတ်လို Facebook, Youtube, Instargram, LinkedIn , Twitter စတဲ့ media platform အသီးသီးမှာ မိမိတို့ရဲ့ product နဲ့ service တွေကို လူအများသိရှိ စေဖို့လုပ်ဆောင်ကြိုးပမ်းရတဲ့အခါမှာ ဗီဒီယိုတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက သိပ်ကိုအစွမ်းထက် အရေးပါတယ်ဆိုတာ အထူးတလည်ရှင်းပြနေဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင် ဒီ Advertising video၊ Promotion Video တွေကို ပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက် Professional Video Creator တွေ၊ Digital Marketing အေဂျင်စီ တွေကို အပ်ပြီးဖန်တီးခိုင်းရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက မိတ်ဆွေဟာ ဘက်ဂျက်တွေ အများကြီးမသုံးနိုင်ဘူး (သို့) ဖြစ်နိုင်ရင် လူအများက စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုယ့် Product/Service ကို အရောင်းစွံစေမယ့်၊ လူကြိုက်များစေမဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို မိမိရဲ့ In-house team (သို့) မိမိလုပ်ငန်းခွင်ထဲက လူငယ်တွေ၊ staff လေးတွေနဲ့ပဲ ဖန်တီးခိုင်းစေချင်တယ်။ (သို့)
မိမိရဲ့ Prodcuct/Service နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မိမိကသာအသိဆုံးမို့လို့ သူများကို လုပ်ခိုင်းနေရတာထက် မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်ဖန်တီးချင်စိတ်ပေါ်နေမယ်။
Eye-catching ဖြစ်စေတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကို ဖန်တီးတာ သိပ်ကိုခက်ပါသလား??????
သင်ယူလေ့လာဖို့အတွက် လနဲ့ချီကြာမြင့်ပြီး အဲ့လောက်အချိန်အကြာကြီးပေးရလား??????
ဗီဒီယိုတစ်ဖိုင်ကို ဖန်တီးဖို့နာရီပေါင်းများစွာ အချိန်ပေးလုပ်ရမှာလား????????
မိတ်ဆွေအနေနဲ့မေးခွန်းတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်း ပြတာလေးကို မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ပေးပြီး နားထောင်ပေးပါ။
ပိုက်ဆံအကုန်အကျသက်သာပြီး ရေရေလည်လည်မိုက်တဲ့ Animated Promotion/Advertising video တွေကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်မယ့် Videomakerfx software လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။
Window7နဲ့အထက် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး ရှိမယ်။RAM 2GB လောက်ရှိမယ်ဆိုရင် Laptop မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Desktop မှာပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ်။ MacOS ကို သုံးတဲ့သူများအတွက်လည်း MacOSx Version ရှိရင် Window ရော၊ Mac User ရော ၂မျိုးလုံးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။
မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့Promo Videoလေးတွေ၊ Ad Video တွေကို တစ်ပတ်အတွင်းဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်အောင် သင်ကြားပေးမဲ့ အတန်းဖြစ်လို့ အချိိန်တစ်ပတ်တော့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (ပြောသလိုမဟုတ်၊ မဟုတ်တာတွေပြောပြီး) ညာ၀ါးဖြီးဖြမ်းတာတွေ လုပ်သင်ပြီး တကယ်မဖန်တီးနိုင်ရင် ၊ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ 100% money back guarantee ပြန်ပေးပါမယ်။
1. ကွန်ပျူတာကို အခြေခံနားလည်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရပါမယ်။
2. စိတ်အားထက်ထက်သန်သန်နဲ့ လေ့လာတတ်သူဖြစ်ရပါမယ်။
Online Course ကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သင်မှာပါလဲ။
တစ်ပတ်အတွင်း လေ့လာသင်ယူလို့ရနိုင်မယ့် ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ အားလုံးကို Studio Quality (အသံပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်း) ထုတ်ထားပေးပါတယ်။ ဒီဖိုင်တွေကို www.myanmaronlineschool.com ထဲမှာ online course တက်ရောက်နေသူများ တဆင့်စီကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မိမိကွန်ပျူတာထဲကို ဒေါင်းလုပ်ယူပြီး လေ့လာချင်သူများအတွက် ဗိဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီအောက်မှာ download link ချပေးထားပါတယ်။
နားမလည်တာ၊ မရှင်းတာ၊ ဆွေးနွေးလိုတာတွေကို Facebook မှာ Videofx -Group ကတဆင့် မေးလို့ရသလို၊ သင်ခန်းစာဗီဒိယိုဖိုင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အောက်မှာလည်း လာရောက်မေးလို့ရပါတယ်။
ဒီအွန်လိုင်းသင်တန်းကိုတက်ရောက်လိုသူများက Register လုပ်ပြီး သင်တန်းတစ်ခါအပ်ထားရင် expire မရှိပါဘူး။ မတတ်မချင်းလေ့လာလို့ရမှာ ဖြစ်သလို မေ့သွားတာ၊ ဖိုင်တွေပျက်သွားတာ ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း အချိန်မရွေး ဝင်ကြည့်ပြီး ပြန်လုပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်၊
Videomaker Fx software နဲ့ Installation အဆင့်ဆင့်ကိုတော့ သင်တန်းထဲမှာ Windows/Mac version၂မျိုးလုံးအတွက်ပေးပါတယ်။
VideoScribe Whiteboard Animation အတန်းကို တက်ရောက်ထားသူ ကျောင်းသားဟောင်းများကတော့ 50% Discount ရှိပါတယ်။
June5ရက်နေ့မတိုင်မီ သင်တန်းအပ်သူ ကျောင်းသားသစ်များအတွက် 20% Discount ရှိပါတယ်။
Course Start Date: June 5, 2020
Normal Price: 70,000 Kyats
Discounted Price: 56,000 Kyats(20% before June 5, 2020)
VideoMakerFx, Easy Animated Video Creation Online Course for Marketers and Business Owners Online course ကနေ ကြိုဆိုပါတယ်။
Option-1 Myanmar Online School Platformမှ တဆင့် (Paypal, Mastercard, Visa Card,JCB)ကတ်များနဲ့ တိုက်ရိုက် ပေးနိုင်ပါတယ်။
Option-2 Wave Money, KBZ,CB,AYA,MAB အစရှိတဲ့ ဘဏ်များမှ တဆင့်လည်း လွှဲသွင်း ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး- 69, 000 Kyats
မည်သည့်နည်းနှင့် မဆို ပေးသွင်းပြီးပါက ဖုန်း ၀၉၉ ၆၅၄၀ ၁၂၂ ၊ ၀၉ ၂၆၃ ၂၈၁ ၉၈၉ တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ဘဏ်ချလန်(သို့မဟုတ်) ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထား တစုံတရာကို Viber Phone No. 099 6540 1222 သို့ပေးပို့ပေးကြစေလိုပါတယ်။(သို့မဟုတ်)
https://www.facebook.com/myanmarelearningschool/ Facebook Page မှာလည်း ပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။